Ụbọchị My Pet » 4 Nzọụkwụ na Send Zuru Okè mbụ Ozi ka a Nwanyị
emelitere ikpeazụ: Sep. 23 2020 | 4 min agụ
Ị chọrọ ịhụ nwaanyị nke na nrọ gị site online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Great, niile i nwere ime bụ melite a profaịlụ na otu n'ime ọtụtụ na-ewu ewu online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na anya site na profaịlụ nke aha ndị inyom.
Adịghị nnọọ nwere anya na ha foto. Ọ bụ mgbe niile mma ile anya na a mara mma foto ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta ma ọ bụrụ na ị pụrụ mere maka onye ọ bụla ọzọ, ị kwesịrị ị na-agụ ya na profaịlụ ma hụ na ọ bụrụ na i nwere otu ọdịmma, ntụrụndụ na nkwenkwe.
Ozugbo i anya site a di na nwunye nke profaịlụ na na ala otu nwa agbọghọ na-na i nwere mmasị, ọ bụ oge dee gị na mbụ ozi ya. Nke a na-abụkarị na akụkụ ebe ọtụtụ ndị ikom na-eme ọ dịkarịa ala otu ndudue. N'agbanyeghị ọ bụrụ na ị na-eru nso a girl online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị, malite mkparịta ụka n'ụzọ ziri ezi bụ nnọọ oké mkpa.
I nwere ike iche ihere ihe m na-aga na-arịọ gị ugbu a, ma ọ bụrụ na ị dị njikere mma gị na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ, ị kwesịrị ị na-aza ajụjụ n'eziokwu:
Ò nwetụla mgbe ị dere a mbụ ozi a girl na ị na-eji tupu ịkpọtụrụ nwa agbọghọ ọzọ? Ma eleghị anya, ozi gị anya dị ka nke a:
M nwere anya na profaịlụ gị na m na-eche na ị bụ n'ezie mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-emekarị dee ozi dị ka nke a, ị na-adịghị na-eche ihe mere na gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mgbalị ha abụghị karịsịa ọma. Ị gaghị mmasị a nwaanyị na-ede ya otu ozi na iri ndị nke ọzọ ụmụ okorobịa zitere ya tupu.
Iji rịa gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ihe ịga nke ọma na ị nwere ka onwe gị dị iche n'ebe ndị pụta ndị mgbe iji otu ahịrị na otu tozuru etozu ozi. Ozugbo i guzobere onwe gị iche, ị ga-enwe mpi ọzọ.
1. Hazie Ozi
Mbụ ndudue na a otutu ndị ikom na-eme na ekele na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ na ha na-adịghị ọbụna itinye oge anya n'ihi na ezigbo aha ya, ma ọ bụ ka ọ dịkarịa ala hazie ozi ya na ya aha otutu. Ụfọdụ ndị inyom pụrụ ịkpọ onwe ha "sweet89" ma na apụtaghị na ị gaghị ahụ ezigbo aha ya na ya mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ.
Ahụwo m a otutu online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ ndị inyom bụ ndị dere ezigbo aha ha ebe na profaịlụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-eji a adịgboroja aha dị ka ha aha otutu. Site n'itinye mgbalị chọpụta ezigbo aha ya, ị na-egosi na ị na-agụ ya na profaịlụ. A otutu inyom adịghị nke a n'ihi na nyere ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ole na ole ụmụ okorobịa ndị na-eche banyere ihe karịrị ya foto, ha na-kpam kpam etiri.
Ke adianade na, anyị mmadụ n'anya ịnụ aha anyị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị gị na mbụ ozi, ọ ga na-eche a ike mmetụta uche njikọ ọ bụrụ na ị lebara ya aha ya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ ezigbo aha ya, ị kwesịrị ị na dịkarịa ala hazie ozi gị na ya aha otutu, kama iji a jenerik "hey ".
2. The Onye ịja
Gịnị bụ ihe kasị mma otito ị pụrụ inye a nwaanyị? Onye na-eme ihe n'eziokwu nakwa na ọ bụghị nụrụ a nde ugboro tupu. Ọ bụ nnọọ ike ịbụ na otu nwanyị mara mma na ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị ọkọkpọhi a otutu ozi site na ụmụ okorobịa.
Ohere ndị dị elu na ha nile na-agwa ya otú mara mma ma na-adọrọ mmasị ọ bụ. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ọzọ Ihọd onye na-ede kpọmkwem otu ihe ahụ akara na nke ikpeazụ iri ụmụ okorobịa dere ya, ọ eleghị anya ga-bụghị zaghachi. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-agwa ya na ị na-eche na ọ bụ mara mma, n'ihi na ya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya enyi na enyi na ya ọnụ ọchị mere ka ị ọchị kwa?
Nke ahụ bụ ihe na iri ụmụ okorobịa ndị dere ya tupu ekwughị. Inye a nwaanyị onye otito bụ mgbe mma karịa ekwu otu stof na ndị ọzọ ụmụ okorobịa na-ama ya gwara ya. Ọ na-egosi ya kpọmkwem ihe mere i ji na-enwe mmasị ka ya na-adịghị ka ndị ọzọ ọtụtụ narị ndị inyom na-nwekwara mara mma foto.
3. Gịnị mere o ji Special?
Na na na, Na m maara na ị chọrọ ide ya n'ihi na ị na-dọtara ya, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ka foto ọ na-egosiputa na ya profaịlụ, ma ihe ndị ọzọ mere i ji na-achọ ga-esi mara ya? Ndo ma a mma ọnụ ọchị na ogologo blond ntutu ekwesịghị ịbụ nanị ihe mere na ị chọrọ ịmatakwu a nwaanyị na ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị.
Ọ ga-pụrụ iche mgbe ị na-agbanwe gị n'ozuzu otito n'ime a onye otito, ma ọ ga-adị mma ọbụna mgbe ị na-ide ya ede a ole na ole mere ọ masịrị gị, na ihe ọ bụla na-eme ya anya.
Ọ bụrụ na ị tinye otu ma ọ bụ abụọ mere ị nwere mmasị na ya, na-emetụtachaghị àgwà na omume ntụrụndụ na ọ na e depụtara na ya profaịlụ, gị inweta a mma zara ga-oké elu.
Women chọrọ ka obi mara mma, ma ha na-achọ izute ndị ikom bụ ndị nwere mmasị karịa ha anya. Site n'ịgwa ya na gị na mbụ ozi na i nwere mmasị na ya anya na ya na àgwà, gị ịtọ onwe gị iche niile ụmụ okorobịa ndị na-agwa ya otú mara mma ọ bụ, enweghị ọbụna na-ahụkarị na eziokwu na o dere na ya profaịlụ otú ukwuu ọ hụrụ n'anya na-na-elekọta ndị ọzọ.
4. Gịnị mere unu ji zuru okè n'ihi na Onye ọ bụla ọzọ na-?
Ugbu a, unu fọrọ nke nta niile dị gị mkpa maka zuru okè mbụ ozi. E nwere nanị otu mgwa nke ka na-efu efu. Ọ maara na-amasị gị ya anya na ya na àgwà, ma otú o na-mara ihe mere i ji na-amasị ya àgwà?
Ọ bụ mara mma doro anya ihe mere i ji na-dọtara ya anya ma ọ bụ na doro anya mere i nwere mmasị na ya mmadụ. Ị nwere ike N'ezie dee na ị hụrụ n'anya eziokwu na ọ na-ọma njem, ma olee otú ọ pụrụ ijide n'aka na ị na-eme ọ bụghị nanị butter ya elu, enweghị ọbụna ọ pụtara.
Ihe ikpeazụ ị ga-eme iji mezue zuru okè mbụ ozi bụ ịgwa ya ihe mere na-amasị gị ya omume ntụrụndụ na ya mmadụ. Ozugbo i gwara ya na i nwere ekele maka ya ahuhu n'ihi na-ejegharị ejegharị, n'ihi na ị na-ama njem nile Asia na-achọ na-aga South America n'afọ ọzọ, ọ ga-aghọta ihe mere na ị bụ zuru okè n'ihi na onye ọ bụla ọzọ.